९८ बर्षिय शताब्दी पुरूषले महानगरले दिएकाे गाडी लिदै भनेः भूकम्पले भत्केको घरमा, गाडी कहाँ राख्ने? – Khabartime
९८ बर्षिय शताब्दी पुरूषले महानगरले दिएकाे गाडी लिदै भनेः भूकम्पले भत्केको घरमा, गाडी कहाँ राख्ने?
२० चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:४६ 237 पटक हेरिएको
शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले उनकै सम्मानका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोमबार सबैलाई हँसाए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । ‘भूकम्पले भत्केको घर त राम्रो बनाउन सकेको छैन। यो मोटर कहाँ लगेर राख्ने हो। तनाव छ’, ९८ वर्षीय जोशीले ललितपुर महानगरले आफूलाई उपलब्ध गराएको गाडी राख्ने स्थान नभएको बताइरहँदा हल हाँसोले गुञ्जियो।